Suuqgeyntu waxay noqotay Lynchpin ee Guusha Is-dhexgalka ee Shirkadaha | Martech Zone
Suuqgeynta ayaa Noqotay Lynchpin ee Guusha Is-dhexgalka ee Shirkadaha
Talaado, Oktoobar 30, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Way adagtahay in la tilmaamo barta shaqadayda ii diyaarisay guusha. Markii aan ka mid ahaa ciidamada badda, intii aan rasmi ahaan ahaa koronto yaqaan, injineer ahaan waxaan sidoo kale ahaa dab-damiye heer sare ah. Waxaa sidoo kale la ii qoondeeyay ESWS, oo ah shahaadada takhasuska dagaalka ee dusha sare oo i siisay aragti guud oo ku saabsan shaqo kasta iyo nidaam kasta oo markabkayga saaran. Aqoontaas iyo waaya-aragnimada wada-shaqaynta ahi waxay aasaas u ahayd waayo-aragnimadayda hoggaaminta dhallinyarada.
Ciidanka Badda kadib, waxaan ka shaqeeyay wargeys ahaan koronto yaqaan warshadeed. Awooddeyda inaan wax ku barto oo aan u shaqeeyo si iskumar ah waxay u horseedday dhiirrigelinteydii hore. Markii aan masuulka ka ahaa kuwa kale, shirkaddu waxay si weyn u maal-galisay horumarkayga, iyadoo i sii marisay tababar shirkadeed oo laga soo qaatay tababbarka shaqaalaha, miisaaniyadda shirkadaha, tababarka, horumarka joogtada ah, iyo barnaamijyo kale oo maareyn iyo hoggaamin ah. Waxaan awooday inaan si fudud ugu wareego boos xakameeye iyo falanqeeye, ka dibna u suuq geeyo keydka macluumaadka.
Muddo labaatan sano ah waxaan ka shaqeynayay suuqgeynta jagooyinka hoggaaminta iyo madaxda dalka oo dhan. Labaatan sano ka hor, baaxadda shaqadaydu waxay caadi ahaan ka jirtay waaxda suuqgeynta, laakiin hadda waxaan la kulmayaa hoggaanka sare in ka badan sidii hore. Sababta tan ayaa ah in suuq geynta dijitaalka ay noqotay tilmaame lagu kalsoonaan karo iyo saadaal waxqabadka shirkadaha.
Labaatan sano ka hor, suuqgeyntu waxay inta badan ahayd istiraatiijiyad hal dhinac ah oo gaysay sumeyn iyo ololeyaal kadibna cabbiray jawaabta sannadihii. Hadda, waqtiga dhabta ah suuq geynta cilmi baarista iyo xogta waxay muujineysaa waxqabadka tilmaame kasta oo muhiim ah oo urur ah - ha noqoto qanacsanaanta shaqaalaha, haynta macaamiisha, meeleynta tartamada, iwm. dadaalka suuq geynta.
Tiro sii kordheysa oo khubaro maarayn urureed ah ayaa dhiirrigelinaya adeegsiga iskudhafyada iskudhafan ee shirkadaha dhexdooda ah. In kasta oo la doorto qaadashada qaabkan kala-saraynta waxay u baahan tahay dib-u-habeyn iyo dib-u-qaybin mas'uuliyadaha, hirgelinta isdhexgalka shaqooyinka iskudhafka ah ayaa jawaab u ah kororka baahsanaanta xogta weyn iyo isbeddelada kale ee dhowaa
Sidee Shirkaduhu Ugu Guuleysan Karaan Isdhexgalka Shaqooyinka Kala Duwan
Muhiim u ah isdhexgalka shaqeynta waa burburka silos iyo dhisida boqortooyo ururka dhexdiisa. Qolka fadhiga ee caafimaadka leh, hoggaamiyeyaashu waa kuwo aan isxilqaamin - iyagoo garawsanaya in allabaryo lagu sameeyay waaxdooda ay u horseedi karto horumarka guud ee caafimaadka shirkadaha. Waxaan wadahadal toos ah la yeeshay shirkadaha waana lahadlay hoos u dhac kharashaadka suuq geynta dijitaalka ah markii aan ogaanay in ilaha kale ee iibku ay sifiican u shaqeynayeen. Tan waxaa badanaa lagu sameeyay luminta wakaaladayda - laakiin waxay ahayd wax sax ah in loo sameeyo caafimaadka macmiilka.
Qolka fadhiga ee aan shaqeynin, hogaamiye kasta wuxuu u dagaallamayaa inuu kor u qaado madaxooda, kordhinta kharashyada miisaaniyadda, waxayna u arkaan waaxdooda inay yihiin udub-dhexaadka ururka. Tani waxay ku jirtaa dhimashadooda maaddaama waax kasta ay tahay inay badbaado oo ay horumarto. Iska yaree horumarinta wax soo saarka iyo hal-abuurka oo dhinta, dhaawaca mustaqbalka iibka iyo haynta. Iska yaree iibka iyo dadaalka suuqgeyntu kuma fuliyaan awooddooda buuxda. Iska yaree adeegga macaamiisha iyo sumcaddaada internetka ayaa cunaysa faa'iidooyinka suuqgeynta ee hay'addaada. Ka goo macaashka iyo hibadaada aasaasiga ah waxay ka tagaysaa shirkadda.
Tirakoobka Taageerada Isdhexgalka Waxqabadka
Shirkadaha sameeya falanqaynta xogta macaamiishooda si dhakhso leh ayey u koraan
Ururada u qaybiya masuuliyadaha suuq geynta kooxaha oo dhan waxay u muuqdaan inay leeyihiin istiraatiijiyad suuq geyn ah oo ka mideysan guud ahaan istiraatiijiyadda guud ee ganacsiga
Isdhexgalka isdhexgalka wuxuu u oggolaanayaa qaab-dhismeed qaab-dhismeed hawl-kar ah oo noqon kara mid dhaq-dhaqaaqa marka mashruucyada loo qoondeeyo
Si kale haddii loo dhigo, suuqgeyntaadu waxay ku fiicnaaneysaa aragti iyo saameyn ku yeelashada ururka oo dhan, waaxahaaga kalena waxay ku hagaajinayaan aragti ku saabsan waxqabadka guud ee suuqgeyntaada. Tani kuma saabsana suuqgeynta inay hoggaanka qabato, ee waxay ku saabsan tahay suuqgeynta in lagu daro dhammaan ururka.
Isdhexgalka iskudhafka shaqada way adagtahay, inkasta oo tirakoobyada sidoo kale ay muujinayaan in sidoo kale ay jirto heer sare oo fashilaad ah oo laxiriira dhaqan galin liidata. Si aad wax badan ubarato, kafiiri faahfaahinta hoose ee uu abuuray Machadka Teknolojiyada New Jersey Master Master ee Maamulka Ganacsiga barnaamijka shahaadada.
People.ai: Furo Awooda Sirdoonka Artifishalka ee Iibkaaga, Suuqgeynta, iyo Kooxaha Guusha Macaamiisha